Archive du 27-déc-2021
Delestazy mety hitohy faran’ny taona Vokatry ny vidin-tsolika 300 miliara tsy voaloa?
Tsy nisy tsy nikolay tamin’ny fahatapatapahan-jiro ny mponin’Antananarivo tamin’iny faran’ny herinandro nankalazana ny fetin’ny Noely iny.
2984 ny tranga, 31 maty, 237 marary mafy Tsy araka ny fitsaboana, ahiana ny fihibohana…
Mandravarava tsy voafehy intsony ary tena mamono sy mandripaka ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara, ary mitombo isan-kerinandro io.
Namonjy sasak’alin’ny krismasy 12 maty nilatsaham-baratra tao am-piangonana
Fiangonana iray no nilatsaham-baratra ny alin’ny sasakalin'ny Krismasy lasa teo tany amin'ny Fokontany Betsipolotra, kaominina ambanivohitra Ankerana Avaratra distrikan'i Tsiroanomandidy.
Hetra trano midangana be “Tokony hazava ny kajy nanaovana azy”
Nitantara ny zava-nisy fony izy mbola mpanolontsain’ny tanana tao amin’ny kaominin’Antananarivo renivohitra ny depioten’ny boriboritany fahadimy, Fetra Ralambozafimbololona.
Famonoana an’I Dr Jean Louis “Tsy afaka hanaiky intsony isika fa tsy rariny loatra”
Nampahery ny vady aman-janak'Itompokolahy Jean Louis Randrianantenainjatovo ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny 24 desambra teo,
Depiote Fetra Ralambozafimbololona “Hitondra amin’ny ady an-trano izao fomba fanao izao”
Tsy hangiana izahay hitaky ny fahalalahana miteny, hoy ny filohan’ny parlemantera eo anivon’ny antoko politika Tiako I Madagasikara, ny depiote Fetra Ralambozafimbololona.
Delestazin’ny Jirama Mamotika fiainan’olona maro
Tsy misy tsy mitaraina amin’ny delestazy ny rehetra. Miantraika tanteraka amin’ny asa fihariana, ary mamotika zavatra maro
Covid-19 mirongatra eto Analamanga Nosokafana ny CTC-19 Soamandrakizay
Ho fandraisana an-tanana haingana ireo mararin'ny Covid-19 maneho "forme modérée" izay maneho fahasemporana ary ilàna fampiasana "Concentrateurs d'oxygène"
SOANIERANA IVONGO Trano 391 isa no ravan’ny afo
Nitrangana haintrano mahatsiravina tany amin'ny fokontany Ambinany, distrikan’i Soanierana Ivongo ny 24 Desambra lasa teo.
Ady amin’ny valala Tonga ny iray amin’ireo angidimby nafarana
Noraisina tamin’ny fomba ofisialy ny faran’ny herinandro teo tao Ankily Ihosy Faritra Ihorombe, ny iray amin'ireo angidim-by natokana hitsiriana sy hamonoana valala ho amin’ity taom-piadiana 2021-2022 ity.
Famarotana tambavy CVO herintaona Nahazoana an-jatony tapitrisa na amina miliara ve?
Nanolotra vola mitentina 112 454 796 ariary ho an'ny fikambanana Akamasoa natsangan'i Mopera Pédro ny filoha Rajoelina Andry ny marain’ny krismasy 25 desambra lasa teo.
Mbola taonan’ny balarora hatrany…
Arahabaina aloha ny rehetra afaka niatrika ny fetin’ny krismasy fahaterahan’ny mpamonjy. Samy nanamarika izany tamin’izay heveriny fa mety sy tratry ny heriny avy na eo aza ny zava-misy iainan’ny firenena.